MR MRT: ခေါင်းစဉ် မရွေး၊ အချိန် မရွေး (Nov 28, 2016)
ခေါင်းစဉ် မရွေး၊ အချိန် မရွေး (Nov 28, 2016)
"အရှင်ဘုရား . . . ကထိန်က တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ထိပဲ ခင်းလို့ရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အရှင်ဘုရားတို့ ရာဟုလာက ခုမှ ကထိန်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလဲ။ ဝိနည်း မတတ်ဘူး၊ ကထိန်မမြောက်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်ပြောစရာ ဖြစ်နေအုံးမယ်။ အလိုလိုမှ ပြောချင်ချင်ရယ်။"
"ဟုတ်တယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ကထိန်ခေတ် လွန်သွားပြီ။"
"ဒါဆို ရာဟုလာ ကထိန်က ခေတ်လွန်ကထိန်လား ဘုရား။"
"ရာဟုလာမှာ ကထိန်ခင်းပြီးပြီလေ။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့က ခင်းတာ။"
"အော် . . . တပည့်တော် မသိလိုက်လို့ ဘုရား . . .။"
"ကထိန် သိမ်ဝင်တာက ဘုန်းကြီးတွေ ဝင်တာလေ။ ဒကာဒကာမတွေက ကထိန်သင်္ကန်း လှူ။ ဘုန်းကြီးတွေ ကထိန်ခင်း။ လပြည့်နေ့က ပြီးခဲ့ပြီ။"
"မှန်ပါ . . .။ ဒါဆို ခု ဟာက . . . အသံချဲ့စက် တကော်ကော်နဲ့ ပဒေသာပင်တွေနဲ့ လုပ်ကြတာက . . .။"
"အသံချဲ့စက် ဖွင့်တာ အသုဘလည်းဖွင့် မင်္ဂလာဆောင်လည်းဖွင့်။ ဖွင့်နေကြတာပဲ။"
"ကထိန် ပဒေသာပင်တွေကရော ဘုရား?"
"ပဒေသာပင်ဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒကာဒကာမတွေ လှူချင်တာလှူကြတာပဲ။ လှူချင်တဲ့အချိန် လှူ။ လှူချင်တာလှူ။ ကြိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့လှူ။"
Posted by Ashin Acara. at 4:09 AM